Oktoobar ayaa la filayaa inay noqoto bisha MacBook M1X | Waxaan ka imid mac
In muddo ah waxaan helnay xoogaa xan ah in Apple ay u badan tahay inay bilawdo MacBook bisha Sebtember. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay in arrintu sidaas ahayn. La bilaabay iPad Mini laakiin ma aha MacBook in badan la sugayay in la helo M1X-ka mudada dheer la sugayay. Si kastaba ha ahaatee, rajadu waa waxa ugu dambeeya ee luma welina waxaa la filayaa in MacBookkan cusubi soo dago bisha Oktoobar.
Iyada oo ku saleysan warbixinnadii ugu dambeeyay, xanta ama wax kasta oo aad rabto inaad ugu yeerto, Apple waxaa la filayaa inay soo saarto moodallo cusub oo MacBook Pro ah oo lagu qalabeeyay M1X chip iyo waxqabadka garaafyada oo la hagaajiyay. Wax kasta oo loogu talagalay dhacdo bishaan Oktoobar oo aan hadda bilownay. Wararka xanta ah ayaa tilmaamaya in shirkadda Maraykanka ay diyaarinayso a dhacdo labaad oo gaar ah dayrta, kadib soo bandhigiisii ​​hore ee "California Streaming." In kasta oo ay jiraan alaabooyin badan oo ku jira liiska soo -saarista suurtagalka ah ee Apple, hal warbixin ayaa iftiiminaysa in khadka MacBook Pro uu heli doono feejignaan dheeri ah.
en el qoraalBloomberg's "Power On" Mark Gurman wuxuu ku adkeysanayaa in Apple ay bilaabi doonto Macs qori M1X ah. Cusboonaysiinta ugu horreysa waxay diyaar ku ahaan doontaa a «noocyada cusub ee MacBook Pro bisha soo socota. Waxaan sidoo kale yeelan doonnaa Mac mini-dhamaadka sare ah, laakiin annaga oo aan awoodin inaan xitaa u dhowaanno taariikhda. Dabcan iyada oo aan saameyn ku yeelan cusboonaysiinta ay tahay in Apple ay bilowdo bishaan Oktoobar.
Gurman wuxuu rumeysan yahay in u wareejinta M1X ay bixin doonto khibrad Apple Silicon oo dheeraad ah «garaafyada-u-xoog badan oo diiradda saaraya xirfadda » ka badan chip M1 ee hadda jira. “Apple waxay horumarin doontaa laba kala duwanaansho, oo labaduba ay ka muuqdaan 10-core CPU oo ka kooban siddeed koor oo waxqabad sare leh iyo laba koorne oo tayo sare leh. Farqiga u dhexeeya noocyadu wuxuu ku jiri doonaa GPU -ga, maadaama sida muuqata ay jiraan noocyo kala duwan oo leh 16 garaafyada garaafyada iyo 32 xargo. ”
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Oktoobar ayaa la filayaa inay noqoto bisha MacBook M1X
Calaamadaha SF 3 ee loogu talagalay Mac sidoo kale waxaa lagu cusboonaysiiyaa astaamo cusub